8days Journal Vol:10,No 36,Cover Star မေသစ္စာမောင် ရဲ့ပုံရိပ်များ - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
8days Journal Vol:10,No 36,Cover Star မေသစ္စာမောင် ရဲ့ပုံရိပ်များ
13 December, 2018, 12:13 PM
Written by ကျော်မျိုးနိုင်
Photo- Kan Su Ho,Make Up -Min Set, Dress-Win Zar Chi Phyo (Fashion House)
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကတော့ Social Media မှာ သာမကဘဲ ပြင်ပလောကမှာပါ ပရိ သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံယူ ထားရတဲ့ မေသစ္စာမောင်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိမှာMTV တွေ၊ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးနေတဲ့ မေသစ္စာမောင်ရဲ့ အလှပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကလည်း နှစ်သက်ကြ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Q. မြန်မာပြည်မှာLGBT တစ် ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောက မှာ ရပ်တည်ဖို့ လွယ်ပါ့မလား။
A. မေ ထင်တာကတော့ အခွင့်အရေးသိပ်မရဘူး။ ဒီနိုင်ငံက တစ်ခုခုဆို ပြောချင်ကြတယ်။ လူ တိုင်းက မွေးလာကတည်းက လူ့ အခွင့်အရေးမရဘူး။ အခက်အခဲ အများကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ ထဲကမှ ကြိုးစားပြီးလုပ်သွားမယ်ဆို ရင် လက်ခံမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါ တယ်။
Q. မေသစ္စာမောင်ဆိုတာ နာ မည်အရင်းလား။
A. မဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာ လောကထဲကို စပြီးဝင်လာတဲ့အချိန် မှာ မေ့ရဲ့ဆရာက ချစ်လို့ပေးထား တာပါ။ နာမည်အရင်းက ဇင်မောင် မောင်ပါ။
Q Sex Change မယ်ဆိုတာ က...
A. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ အပြီး Change ချင်တာပါ။ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်းတမ်းအရ အသက် ၂၀ မပြည့်သေးလို့ စိုးရိမ်တယ်။ အဆင်ပြေ၊ မပြေ ညှိနေပါတယ်။
Q. လိင်ပြောင်းတာနဲ့ မပြောင်း တာ ဘာကွာလဲ။
A. အစောကြီးကတည်းက မိန်းမလို့ ခံယူပြီးသားပါ။ မဖြစ်မနေ မို့ ပြောင်းရတာဆိုတော့ အခုချိန်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ် တော့ ဘာမှပြောင်းလဲသွားတာ မရှိပါဘူး။
Qျ. အိမ်ထောင်ပြုဖို့အစီအစဉ် ရှိလား။
A. မရှိပါဘူး။ လိင်ပြောင်းပြီး ရင်တောင် ချစ်တဲ့သူနဲ့နေရင်နေ မယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိ ဘူး။ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း မိန်းမ ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ မိသားစုကို ပဲ အချိန်အပြည့်အဝပေးမယ်။
A. ချစ်သူတော့ မရှိပါဘူး။ အရမ်းချစ်ရတဲ့သူတော့ရှိတယ်။ အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။
Q. ဆုတောင်းပြည့်မယ်ဆိုရင် နောင်ဘဝမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ် ချင်လား၊ မိန်းကလေးဖြစ်ချင်လား။
A. နောင်ဘဝဆိုတာ မသေ ချာတော့ အခုရတဲ့ဘဝလေးမှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ မိဘ အတွက် အားကိုးရတဲ့အချိန်တွေ၊ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဖြတ်သန်းသွားမယ်။ ကိုယ့်ရတဲ့ဘ၀ လေးမှာ အလှူအတန်းတွေနဲ့ပဲ ဖြတ် သန်းသွားချင်ပါတယ်။ နောင်ဘဝကို မယုံပါဘူး။